Ọ ga-ekwe omume ifriizi ugu na friza - Ugu - 2019
Ugu - ezigbo nri, ihe oriri na-edozi ahụ dị mma nke dị mma na ogologo echekwara n'ụlọ, na-enweghị ọdịdị mbụ na nchịkọta bara uru. Ị nwere ike ịchekwa otu ugu n'ime okpuru ulo gbara ọchịchịrị na okpomọkụ nke + ogo 15 ma ọ bụ kpoo ya - nke a bụ ụzọ nchekwa dị nnọọ mma.
Ma ụzọ kachasị ewu ewu maka owuwe ihe ubi pumpkins maka oyi bụ na-na. Ma ọ ga-ekwe omume ifriizi ugu na iberibe, otu esi kwadebe ugu maka ogwu na ulo na otu esi kpochapu ya nke oma, anyi ga elele anya n'isiokwu a.
Na-egbuke egbuke ugu n'ụlọ
Esi kwadebe ugu maka ogwu
Ugwu nkwanye ugbo na kefriza
Uzo esi eme ka mmanu wepu ocha
Esi esi esi nri maka ugbo
Esi kpoo esi mee ugu
Otu esi eri ugbo kpụkọrọ akpụ (usoro nkwụsị)
Ọ ga-enwe ike ifriizi ugu
Mgbe ufodu, i nwere ike nuru echiche na mgbe ighachapu ugu ahu adighi ihe ozo. N'ihe ụfọdụ, nke a bụ eziokwu, ma ọ bụrụ na ịme ihe niile na-ezighị ezi. Ọ bụrụ na ị na-ehichapụ ya dị ka carrots ma ọ bụ zucini, ya bụ, kpachasị ya ma zipu ya na friza, mgbe ahụ, ugu ahụ ga-adị mmiri ma dị mma maka ịme bred.
Ya mere, iji chekwaa àgwà bara uru nke ugu maka oyi ma mee ndokwa maka efere dị iche iche, ị ga-agbaso iwu ole na ole maka ịfri ngwaahịa a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-ewe ihe ubi nke ugbo maka oyi, ị nwere ike ifrii ya na raw, sie na baked form. Ị nwere ike ifrii mmiri ọ bụla ụdị ugu, ọ ga-abụ mfri eke, ma ọ bụghị overripe.
Iji na-agbaze mmiri, jide n'aka na ị ga-ewe otu ugu kpamkpam, ọ bụghị nkewa, nke dinara oge ụfọdụ n'ahịa ma ọ bụ n'ime friji. Họrọ maka kefriza ugu juputara saa. Mgbe ahụ, ịkwesịrị ịkpụ ugu ahụ n'ime akụkụ abụọ ma bepụ akụkụ nke pulp tinyere mkpụrụ, ebe ọ bụ na ị nwere ike ifriizi naanị akụkụ siri ike nke ugu.
Ọ dị mkpa! Ọ dị ezigbo mkpa maka ịka oyi iji were ezigbo ugu nke ọdịdị dị mma, dị ike, na-enweghị mmebi, ọ bụghị ire ere.
Iji kpochapu ugu raw, ị ghaghị ibu ụzọ dị ọcha n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Iji mee nke a, tinye ugu ahụ n'elu osisi a na-amị mkpụrụ. Idebe ugu otu aka ma nke ozo, jiri nlezianya kpoo ikpo ya na mma aka ya na otu onye na-ejiko ya. Nọgide na-ebipụ ndị bee na-agafe ugu, na-agbanye ya.
Na-esote, belata ugu n'ime otu cubes 2-3 cm, na-eji kichin kichin dị nkọ na serios. Gbasaa ugu cubic na mpempe mmiri na otu akwa akwa ka ha ghara imetụ onwe ha aka ma ghara ịlapụ.
Ebe ọ bụ na ugu ahụ na-eto eto ma ọ bụrụ na oyi kpọnwụrụ ya, ọ bụrụ na cubes na-emetụ ibe ha aka, ha ga-emesị jikọta ọnụ. Na-ezite azu ọka na cubes na friza maka awa ole na ole ka ugu wee gharazie ịcha.
Ị nwere ike ifriizi na nke ọhụrụ ugu, grated. Nkwadebe a na-adabara mma maka toppings, baking na pancakes. Ọ dị mkpa ịkwadebe ugu ahụ n'otu ụzọ ahụ dịka akọwara n'elu, kpochaa ya, tinye ya na akpa rọba na-ejide ya na ifriizi.
Tinye ngwugwu ahụ kpọmkwem dị ka ị chọrọ maka otu ojiji. Nchịkọta na-arụ ọrụ na-adabere na ụdịdị dị nfe ma zigara friza.
Mgbe ugu cubes ifriizi, tinye ha n'ime akpa maka nchekwa ọzọ. Nke a nwere ike ịbụ ihe nchekwa plastic - containers, ite nke Mayonezi, yogọt, wdg. ma ọ bụ akpa plastik nwere ngwugwu. Tinye ihe ndozi ma obu akpa ndi nwere nkwanye n'ime friza.
Ọ dị mkpa! Tupu kpochapu ugu na friza, chọpụta ma ị hapụrụ ụzọ abụọ n'ofe ohere ohere na akpa ma ọ bụ akpa na arụ ọrụ ahụ. Ka ugu na-efu, na-abawanye na olu, akpa jupụtara na akpa nwere ike ịkụ.
E nwere ike ịchekwa otu ugbo a na-ekpo ọkụ n'ụzọ dị otú a ruo otu afọ.
Enwere uzo iji kpochapu ogwu ugbo: sie (blanched) ma ọ bụ mashed. Ọtụtụ ndị nne na-eto eto na-ajụ ajụjụ banyere ma ọ ga-ekwe omume ịkwapụ otu ugu maka nwatakịrị na otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi. Ya mere, maka ojiji dị ka nri mbụ nke ụmụaka, a na-atụ aro ka ifunaa ugu a kwụsịrị n'ụdị poteto.
Umu ahu na-etinye uche ya nke ọma site na aru nwa ya ma na enyere aka na ntachi anya, ma nweekwa uto uto, nke di nma na umuaka. Akwukwo uzo a ga - azoputa ndi nne na - achoputa vitamin na oge oyi na mkpa iji zuta nri umu mmadu.
Iji kpochapu ugu blanched, i kwesiri idozi ya n'otu uzo dika ihe ndi na-achikota. Richaa, bee, bee n'ime cubes hà ma ọ bụ mpekere, gbasaa ha na akwa akwa wee kpoo.
Ekem ugu blanched. Iji mee nke a, tinye mkpụrụ nke ugu n'ime colander, tinye ya n'ime mmiri mmiri ruo 3-4 nkeji, tinyezie ya na mmiri mmiri. Mgbe ahụ, wepuo ugu cubes ma kpoo n'elu akwa akwa. A ga-etinye ugu a kwadebere na mpempe akwụkwọ ma zigara friza maka ọtụtụ awa.
Ugbu a, tụlee otú ị ga-esi kpoo ugu ahụ n'ụdị poteto. Ugu a ga-asacha tupu a ga-ebipụ n'ime cubes nke 3 cm na bee. Ọ bụrụ na ugu dị obere, ọ nwere ike bee n'ime ebe ma ọ bụ ọbụna halves.
Kwadebe ugu maka poteto na-emepụta ihe n'ọtụtụ ụzọ: na ngwa ndakwa nri, na stovu ma ọ bụ na oven. Isi ihe bụ ịkụcha ya ka o wee dị nro ma dị mfe ịkụ ya na ndụdụ.
Maka nri pumpkins na ngwa ndakwa nri Debe mpekere sliced ​​n'ime iko iko jupụtara na ihe dị ka 5 cm nke mmiri. Zipụ na oven na-esi nri maka minit 15-25 na akwa okpomọkụ.
Oge a na-adabere n'ike ọkụ na ọkụ eletrik. Ya mere, mgbe minit 15 mbụ gasịrị, lelee nro na mkpịsị ndụ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mee ka oge nri sie. Maka nri ugu na oven ịkwesịrị ịtọpụ iberibe ugu na mpempe mmiri ma mee ihe na 150 ogo maka otu awa na ọkara.
Ị ma? Nri ndị ọkachamara na-ahọrọ ugbo, na-ekpo oyi maka oge oyi dị n'ụdị poteto mashed, nke a na-esi n'ime ya. Nke a na-enye gị ohere ịchekwa ụtọ kachasị mma ma ghara ịhapụ ihe bara uru, dịka ọ pụrụ ịbụ mgbe isi nri.
Ọ bụrụ na enweghị oven, ị nwere ike ogwu ugbo maka poteto mashed. Obụpde 3 cm mmiri na liter saucepan, ịgbakwunye chopped ugu na esi nri nke 10-15 nkeji, ruo mgbe ọ bụ juu. Kpoo ma ghee. Enwere ike ime nke a na ndụdụ ma ọ bụ na ị ga-ejiri ya. Ozugbo ugu ahụ dị mma, nyefee ya na akpa maka friza.
Ugbu a tụlee otú e si esi esi nri ma kpochapu ugu maka ịzụ nwa. Maka nri nwa Umu uzo ahu di nma kachasi nma: anu aru ha di nma, juicier na nro karia nke umu ndi ozo. Akwukwo ogwu esi esi na oven dika akowara n'elu.
Dị ọcha na blender na mgbe ọ dị jụụ, tọrọ ya na akpa maka ịfrika, na-ahapụ ụfọdụ ohere n'efu. Maka nri nwantakịrị adịghị mkpa, nnukwu nnukwu trays na-adabara.
A na-eji edozi ugwo cubic, nke na-ekpo ọkụ, n'ime akpa nke nwere nkedo ma ọ bụ plastic plastic ma tinye n'ime friza.
A na-agbanwe agbanwe puree n'ime akpa ya na ngwongwo, iko plastik ma ọ bụ bọket, kpuchie ya na plastik, ma ọ bụrụ na enweghị mkpuchi, ma zitere ya na friza. Akwukwo ugbo a na-echekwa na friza maka ọnwa 10-12.
Ị ma? Ụzọ kachasị mma na kọmpat iji chekwaa pumpkins na friza bụ poteto ndị a kpụkọrọ akpụkọ, etiti nke oyi na nchịkọta.
Akwukwo ugbo a kpochapu ebe nchekwa na friza nwere ike iji mee saladi, ofe, poteto ndi a kpochapuru, ọka, nri, pastry, pancakes.
Tupu ị na-eri ugu, mkpụrụ akụkụ oyi kpọnwụrụ, anaghị akwado ọka oriri na-edozi. A gha etinye ya n'ime mmiri, mmiri, ma ọ bụ mmiri ara ehi na-esi nri ma sie nri ruo mgbe emechara ya. Nke a ga-echekwa nri na uto ya.
Pumpkin Puree enwere ike ịmalite ma ọ bụ n'ime friji. Ebe ọ bụ na ugu a na-eme ka ọ bụrụ ihe dị njikere, ọ na-etinye ya na porridge ma ọ bụ efere ọzọ na njedebe nke nri.
Maka nri nwa E nwere ike tinye ya na mmiri mmiri ara ehi ma ọ bụ gbazee na porridge dị ọkụ.
Uru na nsogbu nke carrots. Enwere ike iri nri akwukwo nri na otu esi eme ya?
Kedu ọnọdụ a ga-ahụ maka ịchekwa carrots na beets maka oyi na okpuru ulo site n'enyemaka nke ngwugwu?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ụzọ m ga-esi gbazee ugu n'ụlọ